အလုပျသမဂ္ဂဇင်းအတွက် Anne Hathaway ဓာတ်ပုံကိုရိုက်ကူး
2011 ခုနှစ်တွင်အလုပျသမဂ္ဂဇင်းကမ္ဘာပေါ်မှာပူစွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးအမျိုးသားမိန်းကလေးငယ်များရာပေါင်းများစွာများ၏အမည်များအမည်ရှိအဘယ်မှာရှိသနည်း "Interstellar" ၏ကြယ်ပွင့် Anne Hathaway တစ်ဦးဂုဏ်သရေရှိသတ္တမရာအရပျကိုယူ။ ဤတွင်မဂ္ဂဇင်းလုပျသငျသညျမိမိရွေးချယ်မှုအပေါ် commented ဘယ်လိုဖွင့်: "မျှော်လင့်, ဤလောက၏အဆုံးကို 2012 ခုနှစ်တွင်မလာပါလိမ့်မယ်။ ငါခရစ္စတိုဖာ Nolan အားဖြင့်အသစ်သောရုပ်ရှင်များတွင် "Catwoman" အဖြစ်အန်းကိုကြည့်ချင်ပါတယ် "လို့ Dark Knight ၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း။ "
မဂ္ဂဇင်းလုပျသငျနှငျ့အတူ Anne Hathaway ကျွမ်း
နှောင်းပိုင်းတွင် 1996 ခုနှစ်တွင် 14 နှစ်အရွယ်အန်း "Gigi" ၏ပြဇာတ်ထုတ်လုပ်မှုပါဝင်ခဲ့ - မိန်းကလေးတစ်ဦးအကြောင်းကို, ရုတ်တရက်လူကြီးဖြစ်လာသည်။ သို့သော်အန်းဟာ choir ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်နှင့်အလုပျသမဂ္ဂဇင်းများအတွက်လောကအတွက်အဓိကဇာတ်ကောင်၏ "ရိုက်ကူးရေး" စဉ်အတွင်းကြောင့်နီးပါးကြောင့်ရှုခင်း၏ရူပါရုံကိုမြင်လို့မရပါ။ အခါ, သို့သော်ဖြစ်ကောင်းဒီတစ်နေ့နေ့မှာအယောင်ဆောင်မင်းသမီးတစ်ဦးရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်မှာဖြစ်ပြီးကမ္ဘာကြီးဘွဲ့တစ်ခုဓာတ်ပုံဆရာအနိုင်ရမပြုခဲ့ကြောင်းအချို့နိမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ခဲ့သည်။
Anne Hathaway ဓာတ်ပုံ
နှစ်တွေ Anne Hathaway နေဆဲလုပျသငျ၏နေအိမ်သို့တယ်, ဒါပေမယ့်သူကအခြားမဂ္ဂဇင်းတွေအတွက်ဓါတ်ပုံကိုရိုက်ကူးမှာပါ, မှန်သည် - ထိုဆုံးသောမာရီယို Testino ပြင်သစ် Vogue အတွက်သူမ၏ပစ်သတ်။
ရုပ်ရှင်အတွက်အကဲဆတ်သောမြင်ကွင်းများကိုကြောက်ဘဲ, အသန့်စင်ပြီးအင်္ဂါရပ်များနှင့်အတူမင်းသမီးယခုနာမည်ကြီးဖက်ရှင်မဂ္ဂဇင်းတို့တွင်အကြီးမြတ်လူကြိုက်များအတော်ပင်။ ဗြိတိန်နိုင်ငံတွင် (2010) ခုနှစ် GQ ဓာတ်ပုံကိုရိုက်ကူးခြင်း, အစုံပေါ်နမ်း ပတ်သက်. မင်းသမီးနှင့်အတူအဘယ်အရပ်, ဓာတ်ပုံများအပြင်, လင်းလင်းအင်တာဗျူး၏ seductive (သို့သော်အလွန်ကွ) ။ နှစျခုလက်ရာမြောက်သောဓာတ်ပုံကို Harper ကိုဇား (2013 နဲ့ 2014) ခုနှစ်တွင်ရိုက်ကူးနှင့်ရဲစွမ်းသတ္တိ, လိင်နှင့် "Interstellar" အဘို့အသက်သတ်လွတ်၏ငြင်းပယ်ခံရအကြောင်းကိုအင်တာဗျူး။
Anne Hathaway လုပျသငျသို့ရတယ်?
Anne Hathaway - သဘာဝတတိယရင်ပတ်၏အရွယ်အစားနှင့်အတူဆင်းလှသောမိန်းမ။ သူမသည်ပြသရန်တစ်ခုခုရှိပြီး, သူကသိတယ်။ အဆိုပါမင်းသမီးအနည်းငယ်ရှင်းလင်းသောကိုကြောက် (သို့သော်ခွင့်ပြုချက်အတွင်းမှာသင်တန်း၏) သတ္တိရှိရှိ seductive ဓာတ်ပုံကိုအညွန့်ပစ်မယ့်ရုပ်ရှင်အတွက်မဟုတ်ပါဘူး။ နှင့်အညီ, သင်တန်း၏, သူမအဆုံး၌ထိပ်တန်းတစ်ဆယ်သို့မရခဲ့ဘူးလို့မရဘူး ကမ္ဘာပေါ်မှာစွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးအမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေ ။
Zoe Saldana, Anne Hathaway, Uma Thurman, Julianne Moore နဲ့ဟေလာရီ Duff အချိန်ရဲ့ Up ကိုနေအိမ်ကထောက်ခံခဲ့သည်
မာရီယာ Sharapova ရုပ်ရှင်ရုံအတွက်၎င်း၏ပွဲဦးထွက်စေမည်
"ကျေနပ်" အကဲဖြတ်: Donald Trump ကြယ် divah အကြောင်းကို
သူမသည်အလုပျသမဂ္ဂဇင်းအဘို့အပစ်သတ်ပေမယ့်နေဆဲထဲသို့ရရှိရန်စီမံခန့်ခွဲမခံခဲ့ရပါဘူး။ နှင့်အညီ, သူကား, Anne Hathaway ပရိသတ်တွေ၏မွေ့လျော်ရန်နောက်ထပ်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ဓာတ်ပုံကိုရိုက်ကူးစေစတူဒီယိုအလုပျသမှပြန်လာပါလိမ့်မယ်တော်တော်မူရင်းနှင့်တောက်ပအသွင်အပြင်နှင့်အတူဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်နေ့နေ့မှာမင်းသမီးသိတယ်။
စတိုင် Anne Hathaway
Megan Fox ကရဲ့ style အတွက်မိတ်ကပ်
မိတ်ကပ်မပါဘဲ "အိမ် 2" ၏သင်တန်းသားများ
Miley Cyrus ရဲ့ Tattoos
Swimsuit အတွက် Beyonce
နယူးဆံပင်အရောင် Britney Spears
Parameters Ani Lorak
သူကနှောင့်ယှက်အတွက်ကီဗင် Spacey စွပ်စွဲ, ဒုတိယသားကောင်ထုတ်ပြန်ကြေညာ
ဘဝက hacking ရပ်တန်: မဂ္ဂဇင်း "သိပ္ပံနှင့်ဘဝ" မှသည်ဤ 15 အကြံပေးချက်များမျက်ရည်ရန်သင့်အားငါဆောင်ခဲ့မည်!
တိုင်းအရသာကိုက်ညီဖို့အကောင်းဆုံးချက်ပြုတ်နည်းများ - အေးစက်နေတဲ့ပင်လယ်စာရောနှောချက်ပြုတ်ဖို့ကိုဘယ်လို!
ကျပ် calamari ချက်ပြုတ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
ကလေးတစ်ဦးအတွက် White ကမစင်
နို့မှုန့် - ဖွဲ့စည်းမှု